F-Droid: Android အတွက်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲသိုလှောင်ရုံ Linux မှ
F-Droid - Android အတွက်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲသိုလှောင်ရုံ
Google Play ကိုမသိသူ ၎င်းသည် Android အတွက်တရား ၀ င်ဂူဂဲလ်စျေးကွက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အတွက် app တစ်ခုကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲလိုသည့်အခါတိုင်း၎င်းမှတိုက်ရိုက်ရယူနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီသည့်ဆိုဒ်များပင်ရှိသည်။ Play Store အခမဲ့ရယူပါ ၎င်းကိုနောက်ပိုင်းတွင်အသုံးပြုရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ပုံမှန်အားဖြင့်ထည့်သွင်းထားခြင်းမရှိသည့်အလွန်အမင်းကိစ္စရပ်အတွက်၊ သွားကြစို့။
ပြနာမှာလူတိုင်းတွင်ဤဂူဂဲလ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုရယူပိုင်ခွင့်မရှိခြင်း၊ ဥပမာကျူးဘားတွင်နေထိုင်ပြီး၎င်းတို့၏တစ်ခါတစ်ရံတွင်သူတို့၏ဆဲလ်ဖုန်းတွင်အင်တာနက်ရှိနိုင်သူများ၏ ၁ မှ ၂ ရာခိုင်နှုန်းသာပိုင်ဆိုင်သောသူများ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂူဂဲလ်မှမည်သည့်အရာကိုမျှဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ တပ်ဆင်။ မရပါ။ ကောင်းပြီ၊ ငါတို့ကိုပိတ်ထားလိုက်ပြီ။
ဒီနေရာမှာဂူဂဲလ်ကထိန်းချုပ်မထားပဲအခြားရွေးချယ်စရာသိုလှောင်ရုံများ ၀ င်ရောက်သည်။ အချို့ကိစ္စများတွင်အချို့သောသူများကပိုမိုကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ ယနေ့ငါနှင့်သင်ပြောရန်လာသည်။ F-Droid.
1 F-Droid: သင်၏ Android အတွက်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲဈေးကွက်သို့မဟုတ်သိုလှောင်ခန်း
F-Droid: သင်၏ Android အတွက်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲဈေးကွက်သို့မဟုတ်သိုလှောင်ခန်း
Android သည် iOS ထက်ပိုမိုလွတ်လပ်သည်ဟုဆိုနိုင်သော်လည်း (ဥပမာတစ်ခုဖော်ပြရန်) ၎င်းသည်လုံးဝအခမဲ့မဟုတ်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာသင် install လုပ်နေသော app ၏ပရိုဂရမ်မာတွင်ဂူးဂဲလ်ကဲ့သို့မကောင်းသောရည်ရွယ်ချက်မရှိခြင်းကိုသင်မျက်မမြင်ယုံကြည်ရမည် အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုချင်းစီ၏ကုဒ်အားလုံးပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးအတူတူပင်၊ မည်သည့်အန္တရာယ်မျှမရှိပါ။
con F-Droid သင်အလိုရှိလျှင် app ၏ရင်းမြစ်ကုဒ်ကိုကူးယူပြီးလူတိုင်းရရှိနိုင်သောကြောင့်သင်ကိုယ်တိုင်ပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ ကုဒ်နံပါတ်ရရှိနိုင်ပြီးမည်သူမဆိုပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်လျှင်၎င်းသည်အာမခံချက်ဖြစ်သည်။ အင်တာနက်ပရိုဂရမ်မာ (ဆိုလိုသည်မှာ၊ အခမဲ့လိုင်စင်သို့မဟုတ်အလားတူပါရှိသည့်အက်ပလီကေးရှင်းနှင့်ကုဒ်ကိုထုတ်ပြန်ခြင်း) သည် malware မပါဝင်ပါ။ အင်တာနက်ပေါ်မှလူအားလုံး idiots ဟုသူမယူဆပါက😀
F-Droid Android application များအတွက် software repository (သို့မဟုတ် "application store") ဖြစ်ပြီး၎င်းသည် Google Play စတိုးနှင့်ဆင်တူသည်။ သို့သော်အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ် software သာရှိသည်။ အက်ပလီကေးရှင်းများကို F-Droid ဝက်ဘ်ဆိုက်မှသော်လည်းကောင်း (ဂူဂဲလ်ပလေးစတိုးတွင်မရရှိနိုင်ပါက (ကွန်ပျူတာမှဖိုင်တစ်ခုကိုမိုဘိုင်းဖုန်းသို့ကူးပြောင်းခြင်း) - ဘေးတိုက်ဒေါင်းလုပ်ချခြင်းဖြင့်တပ်ဆင်နိုင်သည်။ Droid သည်၎င်းမှဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားသော application များကိုအလိုအလျောက် update လုပ်ပေးပြီးဝက်ဘ်ဆိုက်သည်လည်း download လုပ်ထားသော application အားလုံး၏အရင်းအမြစ်ကုဒ်ကိုပေးသည်။
F-Droid သည်အသုံးပြုသူများကိုမှတ်ပုံတင်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ကြော်ငြာခြင်း၊ အသုံးပြုသူခြေရာခံခြင်းသို့မဟုတ်စီးပွားဖြစ်ဆော့ဝဲလ်ပေါ်တွင်မှီခိုခြင်းစသည့်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ဆန့်ကျင်သောလှုပ်ရှားမှုများကိုထိန်းချုပ်သောလျှို့ဝှက် application များပါ ၀ င်သည်။
ဟေ့ F-Droid သည်စျေးကွက်တစ်ခုဖြစ်သည် အခမဲ့ application ကို repository ကိုတရား ၀ င် ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှဒီ app ကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်း install လုပ်ပြီးရိုးရှင်းစွာထည့်သွင်းပြီး၎င်းရဲ့ logo ကို Android application များမှာရှာပြီးအခမဲ့ Android ဆော့ဗ်ဝဲကို install လုပ်ပါ။
F-Droid ကို download လုပ်ပါ
ဂူးဂဲလ်ရဲ့ယှဉ်ပြိုင်မှုမရှိတဲ့ပိတ်ပင်မှုကြောင့် Google Play မှာမရနိုင်ပါ
ပြီးတာနဲ့ဖွင့်လှစ်ကျနော်တို့အများအပြား tabs များရှိသည်:
ရရှိနိုင်install လုပ်နိုင်တဲ့ဆော့ဗ်ဝဲကိုအမျိုးအစား၊ ကဏ္ sections အတော်များများခွဲခြားထားတယ်၊ ဥပမာ၊ အင်တာနက်၊ ရုံး၊ အုပ်ချုပ်ရေးဆော့ဗ်ဝဲ။
ထည့်သွင်းထားသည်ဖြေ - အရင်က F-Droid repositories ကနေကျွန်တော်တို့ install လုပ်ခဲ့တဲ့ software
updates များကိုဖြေ - ပိုမြင့်တဲ့ဗားရှင်းကိုမွမ်းမံနိုင်တဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ
ဂူဂဲလ်မှတရားဝင်လောက်ဆော့ဖ်ဝဲလ်များအဝေးတွင်ရှိသော်လည်း (နှင့်ထင်ရှားသည်မှာ) ပိုမိုရင်းနှီးသောလိုင်စင်များ (MIT, Apache, GPL, etc) အောက်တွင်အခြားနည်းလမ်းများလည်းအတူတူသို့မဟုတ်အလားတူလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ အိမ်မှာသူတို့ 2048 ဂိမ်းကိုတကယ်ပဲနှစ်သက်တယ်၊ ငါတရားဝင်ဂိမ်းဗားရှင်းကိုမသွင်းခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့် F-Droid repos မှာတွေ့ခဲ့တဲ့ဆိပ်ကမ်းတစ်ခု။
အားသာချက်များတစ်ခုမှာငါယခင်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့အရာဖြစ်တယ်, အဆုံးစားသုံးသူများအတွက်အများဆုံးအသုံးပြုသူ - လွယ်ကူသောလိုင်စင်များ, အခမဲ့ download နှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်များအတွက်အရင်းအမြစ်ကုဒ်၏ရရှိမှုကြောင့်လည်းအသုံးပြုသူဖန်တီးရန်မလိုအပ်ကြောင်းသို့မဟုတ်အလားတူဘာမှကြောင်းကိုလည်းဖော်ပြရကျိုးနပ်သည်, က download လုပ်နိုင် လျှို့ဝှက်နံပါတ်ထည့်သွင်းခြင်း၊ အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးရန်မလိုဘဲ software နှင့် install လုပ်ခြင်း၊ စီမံကိန်းအတွက်တာဝန်ရှိသူများသည်သူတို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုသောအသုံးပြုသူများ၏သမိုင်းကြောင်း၊ မှတ်တမ်းများကိုသိမ်းဆည်းထားခြင်းမရှိဟုကတိပေးသည်၊ ကျွန်ုပ်အမြင်တွင်အပြုသဘောဆောင်သည်။
တဖန် ... ငါလိုင်စင်များ၏ပြrepeatနာကိုထပ်ခါတလဲလဲကျနော်တို့ကိုအသုံးပြုသည်ဆော့ဖ်ဝဲ၏လိုင်စင်ကိုယူသောငါတို့အဘို့, ကဒီဆော့ဖ်ဝဲကိုမရယူမီသို့မဟုတ် install လုပ်မီ, သူကရှိသည်လိုင်စင်, ငါရှိသည်သို့မဟုတ်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးသောသိရန်အရေးကြီးပါသည်, F-Droid ၎င်းသည်ညာဘက်ခြမ်းရှိ application လိုင်စင်ကို (တတိယပုံရိပ်တွင်တွေ့နိုင်သကဲ့သို့) ပြသသည်။
F-Droid site တွင် APK ကို download လုပ်ရန်လင့်ခ်ကိုသာမကကျွန်ုပ်တို့နှင့် link ကိုပါတွေ့ရှိနိုင်သည် ဝီကီ နှင့်သူ့ကိုဆီသို့ Foro.
ဖိုရမ်တွင်တိကျသောအပလီကေးရှင်းများဆွေးနွေးခြင်း၊ ချို့ယွင်းချက်များတင်ပြခြင်း၊ အကြံဥာဏ်များသို့မဟုတ်အကြံဥာဏ်များကိုပေးထားသည်။ ၎င်းသည်များသောအားဖြင့်အထောက်အပံ့အတွက်ရပ်ရွာနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကောင်းပြီဘာမျှမ F-Droid ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပေါ်တွင်အခမဲ့ဆော့ဝဲလ်အနည်းငယ်ပိုလိုချင်သောသူများအတွက်ဂူးဂဲလ်အပေါ် ပို၍ မှီခိုလိုသူများအတွက်အထူးကောင်းမွန်သောရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » F-Droid - Android အတွက်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲသိုလှောင်ရုံ
ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ f-droid ကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါတယ်၊ ဒါ့အပြင် directory hierarchy ဟာ linux repo နဲ့တော်တော်လေးဆင်တူပါတယ်။ စကားမစပ်, f-droid မှာကျွန်တော် firefox ထည့်သွင်းတော့မယ်ထင်တယ်။
Navigator အနေနဲ့ Lighting Browser (သို့) Lucid ဘရောင်ဇာကိုသုံးပါတယ်။
IO File Manager နှင့် Cyan File Manager တို့သည် File Managers အဖြစ် ..
Calculator, Super SU နှင့် Telegram (အဆုံးတွင်လုံးဝစိတ်မချရသော်လည်း၊ Whatsapp ထက်သာသည်။ )
ရက်အနည်းငယ်အနေဖြင့် ADW ကို Launcher အဖြစ်အသုံးပြုသည်။
ကျွန်ုပ်၏ Samsung Galaxy Mini ကို CM 7.2 ဖြင့် F-Droid ထဲသို့ထည့်လိုက်သည် (၎င်းတွင်ဂူးဂဲလ်ပလေးထက်ပိုကောင်းသော XMBB / Jabber ဖောက်သည်များရှိသည်) ။
ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုအချိန်အတော်ကြာအသုံးပြုခဲ့ပြီး Play Store တွင်ပင်မရှိသောအက်ပလီကေးရှင်းများကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။
Boss, သင် download ခလုတ်မတိုင်မီသင်သော့တစ်ခုလွတ်သွားသည်ဟုကျွန်တော်ထင်သည်။ ကျွန်ုပ် ea -> ကျွန်ုပ်ဆိုလိုသည်
(ဤအရာသည်သင်၏ပုံမှန်နေ့စဉ်ထိန်းညှိမှုအတွက် throlleo ဖြစ်သည်။ )
ဒီအားဖြင့်ထည့်သွင်းရန်ဖြစ်နိုင်ခြေ (ဖြစ်နိုင်ခြေမြင့်မား) အသုံးပြုသူ / စက်ပစ္စည်းများအတွက်အချို့သောအန္တရာယ်များကိုတင်ပြသော app ကိုဆိုလိုတာရှိပါသလား (ကျွန်ုပ်သည်ဂူးဂဲလ်ပလေးအပေါ်အလွန်သံသယရှိသည်)
ဒါပေမယ့် source code ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် Google Play ထက်ပိုပြီးလုံခြုံပါတယ်။
အနည်းဆုံးတော့ source code ကိုကျွန်တော်မဖတ်နိူင်ပါ။ ကျွန်ုပ်လေ့လာလျှင်၎င်းသည်လုပ်ရန်အလွန်ပျင်းရိပါသည်။
သို့သော်သူသည်ဤလောကရှိလူတစ် ဦး ဖြစ်လျှင်ပင်သူသည်ထိုအရာကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်၊ ၎င်းသည်ထူးဆန်းသောအရာတစ်ခုရှိကြောင်းသူသဘောပေါက်လိမ့်မည်။
ဒါ့အပြင်၎င်းကို FSF ကထောက်ပံ့ပေးထားပြီး၎င်းသည်ကြီးမားတဲ့အပေါင်းလည်းဖြစ်တယ်။ 😀
ငါကိုယ်တိုင် F-Droid ကိုတော်တော်လေးရှားတယ်။ Google Play ကိုပိတ်ဆို့ထားသူများအတွက်သင်သည် APTOIDE [www.aptoide.com] သို့သွားနိုင်သည်။ ၎င်းသည် Google Play ကိုငြူစူရန်မလိုပါ။ အသုံးချပရိုဂရမ်များအားလုံးနှင့် Google Play တွင်သင်ရှာမရနိုင်သောအရာများပါရှိသည်။
ငါကသုံးပါကအလွန်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်။ အဲ့ဒီကနေဂန္ဒီ၊ Firefox, K9 မေးလ်၊ KDE Connect, VLC …စသည်တို့ကိုတပ်ဆင်ခဲ့သည်။ မျှော်လင့်ချက်မှာ၎င်းသည် applications များနှင့်ပြည့်နှက်နေလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် gplay နှင့်၎င်း၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များအတွက်ဆာငတ်နေသည့်၎င်းအသုံးချပရိုဂရမ်များကိုချက်ချင်းရပ်ဆိုင်းလိုက်သည်။
နောက်တစ်နေ့ငါ gaking ကနေဂိမ်းတစ်ခုတပ်ချင်တယ်၊ Sonic ကနေတစ်ခုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်သူက root access တောင်းဖို့အမြဲတမ်းတောင်းဆိုခဲ့တယ်၊ ဒါဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲ။ အမှိုက်ပုံး။ ငါကပယ်ဖျက်ကြောင်းအကြောင်းကဘာလဲဆိုတာတောင်မှမမြင်ရဘူး။
Fdroid ဟာအလွန်ကောင်းတဲ့ repository တစ်ခုဖြစ်တယ်။ genulinux desktop application များနှင့် firefox add-ons အားလုံး android တွင်ပျောက်နေသည်။
အမှန်တရားကတော့ယခုတစ်နှစ်လောက်မှာစတိုးဆိုင်ကတော်တော်တိုးတက်လာသည်။ ၎င်းမှာ linuxero ၏စတိုးဆိုင်သည် Android ရှိသင့်သည် !!!
ဇာတိမြေနှင့်တော်လှန်ရေးနှင့်သော်လည်းကောင်းအင်တာနက်မရှိလျှင်ဗင်နီဇွဲလားရှိဤလမ်းကြောင်းသို့ကျွန်ုပ်တို့ ဦး တည်နေခြင်းသည်အလွန်စိတ်မကောင်းစရာပင်။ ငါဘလော့ဂ်၏နောက်လိုက်တစ် ဦး ဖြစ်ခဲ့ပြီးအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲတွင်ကျွန်ုပ်အတွက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရည်ညွှန်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့ကျူးဘားတွင်သော့ခတ်ထားကြသောသနားစရာကောင်းလိုက်လေခြင်း ထပ်မံနှုတ်ဆက်သည်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်သတင်းမှားမဟုတ်ပါကကျူးဘားရှိအင်တာနက်သည်ပိတ်ဆို့ခြင်းသည်ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာဖိုက်ဘာကွန်ယက်နှင့်မည်သည့်ဆက်သွယ်မှုကိုမဆိုဆက်သွယ်မှုကိုကန့်သတ်ချက်များပါဝင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်မြင်မိသည်။ ဆိုလိုတာကကျူးဘားကိုမလိုချင်ဘူး၊ ဂြိုလ်တု ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုမဖတ်ဘဲအင်တာနက်ကိုသုံးခွင့်မပြုဘူး။ ဆိုလိုတာကဗင်နီဇွဲလားကသင်ပြောသလိုမသွားဘူး။ ဘယ်နိုင်ငံမှမနိုင်ရင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏အမျက်ဒေါသသည်ရွေ့လျားနေသည်ဟုမထင်ပါ။ ဆန့်ကျင်လျက်အရင်းအမြစ်သူခိုးများ၏နှောက်ယှက်မှုကိုနှိုးဆွသောအရာသည်ကောင်းသောအရာတစ်ခုခုပြုလုပ်နေသည် (သို့) မပြုလုပ်သည်ကိုညွှန်ပြနေခြင်းဖြစ်သည်။ .. နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်!
ဒီမှာနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးငြင်းခုံမရကြဘူး။ ငါ indiolinux ပြောတာကိုပြောလိမ့်မယ်။ ဒါကတဝက်အမှန်တရားပဲ။ ဆွေးနွေးငြင်းခုံစရာနေရာနောက်တစ်ခုရှာပါ။ မင်းလိုချင်ရင်ဒီဘာသာရပ်ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် FromLinux မှာမဟုတ်ဘူး။
ဥပမာ sourceforge သည်မည်သည့်ကျူးဘားအိုင်ပီကိုမဆိုဒေါင်းလုပ်ချခွင့်မပြုပါ။ ကျူးဘား၏အမှားသည်အမေရိကန်၏အမိန့်ကိုမလိုက်နာပါ။ သတိထားပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ကျူးဘားအတွက် (သို့) ဆန့်ကျင်ဘက်မပြုပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်မစဉ်းစားပါ။ သီအိုရီအရလွတ်လပ်စွာအသုံးပြုသင့်သောနည်းပညာကိုအသုံးပြုခွင့်ပြုထားသည်မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကချမှတ်သောတိုင်းပြည်များကိုသာခွင့်ပြုခြင်းသည်မှန်ကန်သည်။
indiolinux ငါထပ်ခါတလဲလဲပြောရရင်ယူအက်စ်ကနေကျူးဘားနဲ့အပြန်အလှန်မူဝါဒကမတရားဘူးလားဆိုတာကိုငြင်းခုံဖို့ဆိုတာဒီဘလော့ဂ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်မဟုတ်ဘူး။ ကျေးဇူးပြုပြီး GNU / Linux အကြောင်းပြောကြရအောင်။ ဒီနေရာမှာနိုင်ငံရေးမဟုတ်ဘူး။ မေးစရာများလွန်းသလား
True Elav ရဲ့အချက်ကဒီမှာဘာမှမရှိဘူး၊ အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲပဲ၊ ဗင်နီဇွဲလားမှာလမ်းလျှောက်ရင်းငါတို့မှာဂြိုလ်တုရှိတယ်၊ ငါ့မှာတစ်လကို 4GB ရှိလို့အင်တာနက်ကိုသိမ်းရတယ်။ နှင့်တိုက်ဆိုင်မှုအားလုံးတော်လှန်ရေးလာကတည်းက။ Elav၊ အကယ်၍ သင့်တွင်ဤအချက်ကိုမှတ်ချက်ပေးရန်နေရာရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြပါကအကျိုးရှိလိမ့်မည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
နို MC ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာနံနက်ခင်းမှာငါမေးစရာမေးခွန်းတစ်ခုရှိတယ်။ မင်းကငါ့ကိုကူညီဖြေရှင်းပေးနိုင်မလားဆိုတာစမ်းချင်တယ်။ ဂူဂဲလ်ပလေးအခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲရဲ့အခမဲ့အပလီကေးရှင်းလား။
NOEL MC ကိုစာပြန်ပါ
SUSE Studio (အပိုင်း ၂) - ကျွန်ုပ်တို့၏ဆော့ဗ်ဝဲကိုဘယ်လိုရွေးရမလဲ
ကြက်သွန်။ ဖိုင်များကို Tor အသုံးပြု၍ မျှဝေခြင်း